Idi Onye na-emepụta kreen kacha mma na ụlọ ọrụ |Tongli
Kreenị kwụ ọtọ, n'okpuru ntọala nke ergonomics na-eju afọ, iji teknụzụ njikwa, kreenụ kwụ ọtọ pneumatic nwere ọrụ nkwusioru zuru oke, enwere ike iji ya n'oge njikwa ihe dị iche iche.
Krane nguzozi bụ ụdị akụrụngwa na-ebuli ihe ọhụrụ, nke na-eji usoro mbuli elu pụrụ iche na-ebuli ihe dị arọ, kama ịrụ ọrụ aka iji belata ike akụrụngwa nke akụrụngwa.
Site na "ike ndọda n'ụzọ ziri ezi", crane nguzozi na-eme ka mmegharị ahụ dị nro, na-azọpụta ọrụ, dị mfe ma dabara adaba maka ọrụ na njikwa na mgbakọ oge niile, nke nwere ike belata oke ọrụ ma melite arụmọrụ ọrụ.
Igwe nguzozi nwere ọrụ nke ịkpụ ikuku na nchebe na-ezighị ezi.Mgbe a na-ebipụ isi ihe na-enye ikuku, ngwaọrụ na-ekpuchi onwe ya na-arụ ọrụ iji gbochie crane nguzozi ka ọ ghara ịda na mberede.
Igwe nguzozi na-eme ka mgbakọ ahụ dị mfe ma dị ngwa ngwa, nhazi ahụ ziri ezi, ihe ahụ dị na nkwụsịtụ oghere nke akụkụ atọ n'ime ọrịa strok a kwadoro, na ihe nwere ike ịtụgharị aka na aka elu na ala, aka ekpe na aka nri.
Ọrụ nke nguzozi na-ebuli elu dị mfe ma dị mma.A na-etinye bọtịnụ njikwa niile na njikwa njikwa.A na-ejikọta aka na-arụ ọrụ na ihe eji arụ ọrụ site na ntinye.Ya mere ọ bụrụhaala na ị na-ebugharị aka ahụ, ihe eji arụ ọrụ nwere ike iso.
Atụmatụ kreenụ itule pneumatic
A. Ergonomic elu na ala nkwusioru njikwa adabara mgbanwe ọsọ na ezi n'iji ya gee ntị ibu
B. Ọ bụrụ na ikuku ikuku kwụsịrị na mberede, akụrụngwa nwere ike igbochi ibugharị ibu ahụ
C. Ọ bụrụ na ibu ahụ apụọ na mberede, centrifuge mmiri breeki ga-akwụsị ngwa ngwa elu nke eriri ahụ.
D. N'okpuru nrụgide ikuku gosiri, ibu a ga-ebuli agaghị agafe ikike nke akụrụngwa
E. Gbochie ibu nkwudo ka ọ daa karịa sentimita 6 (152 mm) ma ọ bụrụ na agbanyụrụ isi iyi ikuku.
F. Ruo 30 ft (9.1 m) n'ogologo na ruo 120 in (3,048 mm) n'ogo dabere n'ụdị eriri.
Nke gara aga: Onye na-eme ihe na iko mmiri ara
Osote: Trolley mkpagharị mkpanaka
Onye na-ebuli cylinder